Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Fanairana amin'ny seranam-piaramanidina Manitoba: mbola mitokona tsy ho ela
Tany am-piandohana, ny sendikan'ny Public Service Alliance of Canada (PSAC) dia nanome fe-potoana fitokonana tamin'ny 12:01 maraina ny sabotsy 22 jolay. Na izany aza, noho ny fandrosoana mitohy amin'ny fanelanelanana dia nitarina izany.
Mbola mety hisy ny fitokonana ao amin'ny seranam-piaramanidina Winnipeg any Manitoba hatramin'ny alatsinainy lasa teo, raha toa ka tsy afaka nanao fifanarahana am-pahefana tamin'ny sendika ny sendika. Ny Alliance Public Service Alliance any Canada dia nanolotra ny fampandrenesana 72 ora takariva alina.
Nanomboka ny alatsinainy 17 jolay ho avy izao ny fifampiraharahana ampian'ny mpanelanelana tendren'ny federasiona ary hitohy hatramin'ny faran'ny herinandro. Raha rava ny dinika fanelanelanana dia nanoro hevitra ny manam-pahefana Winnipeg Airport (WAA) ny PSAC fa hanomboka amin'ny 3:00 maraina amin'ny Alatsinainy 24 Jolay 2017 ny fitokonana.
"Ny ekipanay dia manolo-tena hiasa andro aman'alina hatramin'ny alatsinainy maraina hifampiraharaha amin'ny fifanarahana ara-drariny ho an'ireo mpikambana ampiasain'ny WAA," hoy i Marianne Hladun, filoha lefitry ny Executive Executive, PSAC Prairies. "Mbola manantena izahay fa afaka mahazo fifanarahana ary hisoroka ny filan'ny hetsika fitokonana."
Mpiasa 150 eo ho eo — ao anatin'izany ny mpitantana ny adidy, ny mpitantana, ny mpivarotra isan-karazany, ny mpiasa IT, ny fikojakojana ny seranam-piaramanidina ary ny mpiasa - no soloin'ny PSAC sy ny Sendikan'ny mpiasa fitaterana kanadiana (UCTE). Tsy nanana fifanarahana ireo mpiasa nanomboka ny 30 jona 2016 ary nifampiraharaha nanomboka ny volana oktobra 2016.
"Ny mpikambana ao amin'ny sendika manerana ny firenena dia mijoro ao ambadiky ny mpikambana ato amin'ny seranam-piaramanidintsika ary miaiky fa ilaina ny miady amin'ny fifanarahana sy ny fifanarahana hafa mandratra ny mpiasa," hoy i Teresa Eschuk, filoha lefitry ny faritra, UCTE Prairies ary Avaratra.
Ny PSAC dia misolo tena ny mpiasa maherin'ny 170,000 manerana an'i Canada, isan'izany ny 8,000 any Manitoba ary mpiasa 150 ao amin'ny Winnipeg Airports Authority. UCTE dia singa iray ao amin'ny PSAC, izay misolo tena ny mpiasa amin'ny sehatry ny daholobe — Transport Canada, Guard Coast Coast Kanada, Parks Canada — ary sehatra tsy miankina — Airport and NAV Canada.
Afrika: Tanzania dia nanome ny anarany Safari Destiny Safari